Ebumnuche nke data-Mepụta Jedi-Level Social Ads | Martech Zone
Star Wars na-akọwa Force dị ka ihe na-agabiga n’ihe niile. Darth Vader gwara anyị ka anyị ghara ileda ya anya na Obi-Wan gwara Luke na ọ na-ejikọ ihe niile ọnụ.
Na-ele anya na mgbasa ozi mgbasa ozi mgbasa ozi, ọ bụ data nke na-ejikọ ihe niile, na-emetụta ihe okike, ndị na-ege ntị, izi ozi, oge na ihe ndị ọzọ. Ndị a bụ ihe mmụta ole na ole iji nyere gị aka ịmụta otu esi ebugharị ikike ahụ iji wulite mgbasa ozi siri ike karị.
Ihe ọmụmụ 1: Lekwasị Anya na Ebumnuche doro anya
Gị lekwasịrị anya na-ekpebi eziokwu gị.
Nke a bụ Gon Jinn
Gbado anya bụ ihe kachasị mkpa dị mkpa maka mkpọsa ọ bụla na-enweghị isi na enweghị elekwasị anya bụ nnukwu ihe kpatara ọdịda. Ihe doro anya, ebumnobi nwere ike ịba uru na ha ga- chọpụta eziokwu gị.
Ozugbo ị họọrọ ebumnuche mkpọsa, jiri akara data na weebụsaịtị gị yana ọwa mmekọrịta gị iji hụ ma ọ ga-emezu.
Gbado anya na ebumnobi gịNweta adreesị ozi-e 1,000 na atụmanya.
Nyochaa data weebụsaịtị: Dabere na data gara aga, anyị hụrụ na ọ na-ewe mmadụ 25 na-eleta ụdị a iji nweta otu adreesị ozi-e.
Kpebisie ike ihe mgbaru ọsọ weebụ: Ọ bụrụ na mmadụ 25 = adreesị ozi-e 1, ọ ga-ewe 25,000 gaa na ibe weebụ iji nweta adreesị email 1,000.
Na-agba ọsọ mmekọrịta: Imirikiti nyiwe mgbasa ozi mmekọrịta nwere ngwa ọrụ na-egosi atụmatụ atụmatụ, pịa ma ọ bụ ntụgharị. Fanye mmefu ego gị na ngwaọrụ ndị a iji hụ ma iru ọnụọgụ weebụsaịtị 25,000 ga-ekwe omume.
Nyocha na calibrate: Ọ bụrụ na ihe mgbaru ọsọ gị n'ámá na gị ego, oké! Ọ bụrụ na ọ dị n'okpuru, setịpụ ebumnuche ndị ọzọ ma ọ bụ bulie mmefu ego gị.
Ihe nkuzi nke 2: Jiri nlezianya Họrọ Uzo Gi
Egwu ọnwụ bụ ụzọ dị n'akụkụ ọchịchịrị.
Ọtụtụ ndị na-ere ahịa na-eme mkpebi dabere n'echiche na ọ bụrụ na ha anaghị agbasa mgbasa ozi ha na ndị na-ege ntị ka o kwere mee, ha ga-atụfu asọmpi ahụ. N'ezie, ịchọta nri ndị na-ege ntị dị ka ịchọta agịga na haystii galactic na data ga-enyere gị aka iru ha nke ọma ma na-efu oke.
Ugbu a ị ga - enwekarị echiche maka ndị na - ege ntị ịchọrọ ịgbasa ozi, mana ịkwesịrị ịchọpụta oge na ebe kachasị mma iji ruo ha. Nke a bụ otu esi ekwe ka data kpebie:
Gwuo na ike netwọkụ: Netwọk mmekọrịta ọ bụla nwere ike doro anya nke ga - enyere gị aka iru ndị na - ege ntị ụzọ dị iche iche. Dịka ọmụmaatụ, LinkedIn dị mma maka ịchọrọ aha ọrụ, yabụ ọ bụrụ na ndị na-ege gị ntị bụ ndị injinia, can nwere ike iwulite ndị na-ege LinkedIn n'ụzọ dị mfe iji ruo ha aka. Agbanyeghị, ọ bụrụ na mkpọsa gị gbadoro ụkwụ na teknụzụ injinia akọwapụtara (kwuo njem ọsọ ọsọ), ịnwere ike ịgbakwunye na mgbasa ozi Twitter nke na-enye gị ohere ịbabere dabere na mkparịta ụka ndị mmadụ na-enwe na teknụzụ ahụ n'ihi na ha etinyeworị isiokwu a. .
Na mgbasa ozi mmekọrịta, nha eme okwu: Na Alaeze Ukwu etiwapụ Laa azụ, Yoda gwara Luk na "nha adịghị mkpa”Ma na mgbasa ozi, oke bụ ihe niile. N'ikwu okwu n'ozuzu, ọdọ mmiri buru ibu na-enye ohere ka netwọkụ mgbasa ozi na-achịkọta ihe site na data algorithm nke ya nke ọma iji nyere aka chọpụta ndị mmadụ nwere ike ịzaghachi mgbasa ozi gị. Obere ndị na-ege ntị na-enye obere data maka algọridim ndị ahụ, mana ha dị ọnụ ala karịa ma nwee ike inyere gị aka ịme ihe dịka ụlọ ọrụ ọ bụla ma ọ bụ ụlọ ọrụ na-elekwasị anya. Mgbasa ọ bụla dị iche, ya mere, ụgbụ ma ọ bụ obere ụgbụ ị na-agbanye ga-adị iche.
Mee ka ndị mmadụ na-asọ mpi: Have nwere ọtụtụ nhọrọ ezubere iche maka mmekọrịta mmadụ na ibe ya nke gụnyere ndepụta ndị ahịa dị ugbu a, ndị na-ege ntị na ndị na-eme ihe omume / ọdịmma. Ugbu a karịa ịtụkwasị obi n'otu ụgbọ mmiri iji gbaa ọsọ ahịa, na-agba ọsọ slimmer, na-atụgharị uche ndị na-ege ntị megide ibe gị ma ị nwere ike ikpebi nke kachasị dị irè wee gbanwee usoro mgbe emechara dabere na arụmọrụ.
Ihe nkuzi 3: Dabere na Data, O bughi Ochioma
Na m ahụmahụ, ọ dịghị ihe dị ka chioma.
Jedi pụtara kechioma n'ihi ọzụzụ kpụ ọkụ n'ọnụ ha na itinye aka na ha mụta otu esi amata ihe ha ga-eme na otu ha si dabaa na Force na-eduzi ụzọ ha. Maka ndị na-ere ahịa na-elekọta mmadụ, data na-arụ otu ọrụ site na usoro ọ bụla nke njem mgbasa ozi galactic anyị, na-enyere anyị aka ịme mkpebi gụrụ akwụkwọ dabere n'eziokwu, karịa ọchụnta.
Ugbu a nnukwu akụkụ nke mkpọsa na-ekpebi ihe a ga-eji ihe okike na izi ozi mee ihe iji kwalite ya. Ọtụtụ mgbe, nke a na - ebute nghọtahie ndị ọrụ, mana data na - edozi ha. Nke a bụ otu:
Mepụta usoro mmalite: Ihe okike obula kwesiri ikwekọ n'ụkpụrụ di iche iche, dikwa na ọdịnaya a na-akwalite ma hazie ya maka ndị na-ege ntị. Nyochaa ihe emere n'oge gara aga iji chọpụta ihe ga-arụ ọrụ n'ọdịnihu.
Nwaleenụ ihe niile: Ọtụtụ mgbe, ụdị na-agbali ịgbasa mgbasa ozi ha ruo na otu ihe oyiyi na ozi. Ihe ize ndụ bụ na ọ bụrụ na ọ rụọ ọrụ, ị maghị ezigbo ihe kpatara na ọ bụrụ na ọ daa, ị maghị ihe ị ga-ata ụta. Kama, nwaa opekata mpe ihe onyonyo / vidiyo anọ, ụdị anọ nke nnomi mgbasa ozi, isi okwu atọ na omume abụọ (CTAs). Ee, nke a na - ewe ogologo oge karịa ịtọlite, mana ọ na - enye data bara oke uru banyere ihe ndị na - arụ ọrụ na ihe kpatara ya.
Na-ebuli ihe niile elu: Ogologo oge gara aga bụ ụbọchị ịtọ-ya-ma chefuo ya mgbasa ozi mgbasa ozi. Mgbe ịmalitere, ị kwesịrị inyocha usoro arụmọrụ kwa ụbọchị maka izu mbụ yana opekata mpe ugboro abụọ n'izu.
Wepu onyonyo, ozi ma ọ bụ isi okwu na-adịghị mma.
Gbanwee mmefu ego na onyonyo, ozi ma ọ bụ isi okwu na-arụ ọrụ gabiga ókè.
Ọ bụrụ na mkpọsa anaghị arụ ọrụ, gbanyụọ ya, nyochaa data ahụ ma gbalịa idozi ya kama ịhapụ ịhapụ mmefu ego.
Ọ bụrụ na ị na-anya ọtụtụ clicks mana ọ nweghị onye na-atụgharị na weebụsaịtị gị, nyochaa peeji ọdịda - ọ nwere ike na ozi nke mgbasa ozi ahụ? Yourdị gị a toro oke ogologo? Mee mgbanwe. Nnwale. Tụgharịa mkpọsa gị ma hụ ma ọ na-edozi nsogbu ahụ.
Ndị na-ege ntị dị warara: Maka ọtụtụ mkpọsa, a na-eli ndị na-ege gị ntị na ndị na-ege ntị (agịga gị na galactic haystack) na ọ bụ ọrụ gị ịdọpụta ndị mmadụ. Otu ụzọ dị mma isi mee nke ahụ bụ ime ka ndị na-ege gị ntị nụ dabere na arụmọrụ.
Ọ bụrụ na mba ụfọdụ ma ọ bụ steeti anaghị aza, wepụ ha na ọdọ mmiri ndị na-ege gị ntị.
Ọ bụrụ na ụfọdụ ndị mmadụ na-aza na ọnụego ugboro abụọ nke onye ọ bụla ọzọ, gbanwee mmefu ego iji kwado ha.
Jiri ndị na-ege ntị wee soro ha rụọ ọrụ. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na ị na-agba mkpọsa Facebook site na iji weghachite webụsaịtị, mepụta ndị na-ege ntị na-anọchi anya ndị na-arụsi ọrụ ike. Jirizie ndị a na-ege ntị wulite ndị na-ege ntị na-ele anya ma melite nsonaazụ gị karịa.
N'ebe gbara ọchịchịrị anyị hụrụ onwe anyị, na ntakịrị ihe ọmụma na-enwu ụzọ anyị.
Ihe omuma di na ihe omuma banyere ndi mmadu Jedi, data bu otu ezi ihe omuma. Cheta na data ị na - ebikọ mgbe ị na - eme mkpọsa mgbasa ozi gị, ọ ga - abụrịrị nsonaazụ gị.
Ka ike dịrị gị, mgbe niile.
Tags: Obi Wan Kenobiebuliagha kpakpando
Michael bụ Social Media Director na Mgbasa Ozi Mgbakwunye na Mgbakwunye. Mgbasa mgbasa ozi bụ karịa ọrụ maka ya, ọ bụ agụụ nke mere ka Michael jikọta ihe okike ya, uche nyocha ya, na ịhụnanya ya maka ndị ahịa na-arụ ọrụ na-esiri ike mgbe niile na ọ dịghị agwụ ike.
Kuki anaghị adịte aka karịa uru: Otu njirimara na njirimara onwe onye na-agbanwe na World-Cookie World